Home » Lahatsoratra farany farany » Travel Travel » Ahoana no hahavelomanao ny bibidia manafika anao?
Travel Travel • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Betsaka ny zavatra azonao atao mba hisorohana ny fanafihan'ny biby fa ny fahalalana raha milamina na miady dia zava-dehibe! ”
Etazonia dia faritany mampidi-doza raha resaka fanafihana mahafaty olona ataon'ny bibidia. Tao anatin'izay 20 taona lasa izay dia olona 520 no novonoina tany Texas, fanjakana amerikana mampidi-doza indrindra raha resaka fanafihana biby mahafaty no resahina.
Ny ekipa ao Outforia efa nanambara izay milaza fa nisy fanafihana biby mahafaty indrindra nanomboka ny taona 1999 ka hatramin'ny 2019, miaraka amin'ny biby izay manana nahatonga ny fahafatesan'ny ankamaroany ary nanome torohevitra manampahaizana momba ny inona no hatao rehefa notafihan'ny biby mampidi-doza.
Miomàna amin'ny lisitry ny zavatra azonao atao rehefa manafika mba handeha velona velona.
Ny fanjakana amerikana folo maty indrindra raha ny fanafihan'ny bibidia dia
Texas maty 520
Ny fanjakana amerikana azo antoka indrindra raha ny fanafihan'ny biby dia
Dakota Avaratra: 0
Rhode Island: 0 taona
Ny biby mahafaty indrindra izay mamono ny Amerikanina mandehandeha eny
Orsa mainty: 54
Orsa Polar: 10
Carl Borg dia tonian-dahatsoratry ny Outforia ary mpikaroka fatratra amin'ny fotoana malalaka ananany. Manana torohevitra matihanina momba ny zavatra hatao izy rehefa notafihan'ny biby mampidi-doza.
“Ny fanafihan'ny biby dia fampitahorana mampatahotra nefa tena izy tokoa rehefa mandeha manao traikefa manodidina an'i Amerika Avaratra, ka tianay hatao izay hahalalanao ny fepetra tokony horaisina raha mahatsapa ianao fa voan'ny iray amin'ireo biby mampidi-doza ireo.
Ny torohevitro lehibe ho an'izay mandeha amin'ireto dia niainany tany amin'ny toerana mety hahita biby dia ireto dia tokony ho vonona. Manoro hevitra anao foana aho handinika ireo biby malaza indrindra ao amin'ny faritra notsidihinao, satria ny biby isan-karazany dia midika hoe protokol samy hafa rehefa miatrika fanafihana. Ny fahafantarana ny tsy fitovizan'ny bera volontany sy mainty ohatra dia afaka mamonjy ny ainao! Rehefa mahatsapa fandrahonana avy amin'ny bera mainty ianao dia tokony hitombo lehibe araka izay tratra ny tenanao, atsangano ambonin'ny sandanao ny tananao ary mitabataba be. Raha manana bera volontsôkôlà ianao, dia tokony ho tony foana ary hahatratra ny famafazana bera.
Amin'ny biby anaty rano toy ny antsantsa dia tokony hisorohana ny filomanosana misavoritaka foana ianao satria mety hahasarika azy ireo izany, na izany aza. raha manomboka manafika anao izy ireo dia ampiasao ny fitaovam-piadiana, na ny totohondrinao sy ny tongotrao - kendreo ny masony sy ny angidiny.
Ho an'ny Alligators dia tsy mitovy izy io, tsara kokoa hatrany ny misoroka ny ony marihitra, raha misy manafika ianao dia miverena avy hatrany fa aza manohitra ny fihodinana satria mety hahatonga anao hanapaka taolana.
Loza mahazatra ny bera amin'ireo làlam-pandehanana an-tongotra maro any Amerika Avaratra, ary ny karazany tsirairay dia tokony hitondrana amin'ny fomba hafa. Amin'ireo karazana orsa telo misy any Amerika Avaratra dia mety hahita bera mainty na bera volontany ianao, satria ny bera polar ihany no hita avaratry ny faribolana Arctic.
Raha sendra bera mainty ianao dia manana fotoana mety tsara kokoa hisorohana ny ratra mafy na ny fahafatesana. Ny bera mainty dia kely noho ny bera volontany ary, na eo aza ny anarany, dia misy loko isan-karazany. Raha sendra iray ianao dia tokony hataonao lehibe araka izay tratra ny tenanao, atsangano ambonin'ny tananao ny sandry ary mitabataba be. Ny namanao mandeha dia tokony hanao zavatra mitovy amin'izany eo am-panaovana ny toerana akaiky anao araka izay tratra. Ity dia hanolotra eo anoloana ny bera mampatahotra ary antenaina hahatonga azy hamela irery anao tsara izany. Na izany aza, tsy tetika tsy azo adalana velively izany, ary tokony hitondra bear spray miaraka aminao foana ianao amin'ny toerana mora aleha rehefa hiditra any amin'ny firenena bera, ary ny tandroka rivotra dia mety tena ilaina amin'ny fampitahorana ireo bera mainty.
Raha sendra orsa volontany ianao dia tokony hanana fomba hafa mihitsy. Tokony hitanjozotra miadana sy milamina ianao raha hiketsa ny bera raha mbola mijanona araka izay azo atao ihany. Raha vantany vao vonona ny hampiasa ny mpamily anao ianao dia manomboka miala amin'ny orsa amin'ny fomba miadana sy voafehy, manao izay ezaka rehetra tsy hanaitra ilay biby, raha miteny am-peo milamina sy milamina ary manome toky. Raha manomboka manantona anao ny bera volontsôkôlà dia kendreo atsipazo eo ambonin'ny lohan'ilay zavaboary ny tsifotra bera anao ary omeo doka famafazana maharitra.
Ireto misy torolàlana vitsivitsy momba ny fomba ahafahanao miady rehefa notafihan'ny biby mampidi-doza ianao
Toy ny fanafihana biby ihany, tsara kokoa hatrany ny manandrana misoroka ny fihaonana amin'ny antsantsa raha azo atao. Mety ho sarotra izany satria sarotra ny mahita milomano ao ambanin'ny rano. Na izany aza, raha mahita ny olona iray dia tokony handeha amin'ny fomba milamina araka izay tratra mankany amin'ny morontsiraka ianao. Sorohy ny filomanosana sy ny famafazana tsy mikotrana, satria ity hetsika ity dia hisarika ny sain'ny antsantsa.
Raha misy hanafika anao ny antsantsa dia asaina manafika azy arak'izay tratry ny herinao ianao, mampiasa izay azonao ampiasaina ho fitaovam-piadiana, na mampiasa totohondry sy tongotrao raha ilaina izany. Tokony ho lasibatrao ny masony sy ny angidiny, satria izy roa ireo dia faritra mora tohina ho an'ny antsantsa. Ny oron'ny antsantsa koa dia voalaza fa toerana malemy afaka hanakana azy ireo tsy hanafika intsony.
Raha voakaikitra ianao, na mahatsapa zavatra milomano amin'ny tongotrao fotsiny dia tokony hiala haingana ao anaty rano haingana ianao ary apetaho amin'ny faritra mandeha ra. Tokony hiantso serivisy vonjy maika ianao avy eo ary hahazo fanampiana ara-pahasalamana haingana araka izay tratra.
Mety ho sarotra ny mahita bibilava, satria mirona any amin'ny ahitra lava, anaty ala, na any anaty kitrokely sy faritra rakotra. Azonao atao ihany koa ny mihaona amin'ny bibilava rehefa mandeha mamaky ny rano ianao, izay mety hidika hoe tsy tsapanao fa voakaikitra ianao raha tsy tara loatra. Amin'ity tranga ity dia tokony hanamarina hatrany ireo gorodona ianao mba hahazoana antoka fa tsy tena manaikitra bibilava izy ireo.
Ny kaikitry ny bibilava dia azo fantarina amin'ny marika puncture roa eo amin'ny ratra. Ny fambara hafa dia misy ny mena sy ny fivontosana manodidina ny punctures, ny fanaintainana mafy, ny fisaleboleboana ary ny fandoavana, ny fahitana manelingelina, ny fahasarotana amin'ny fifohana rivotra, ny fofonaina na ny fahatsapana ny fikolokoloana ny rantsam-batanao, ary ny fitomboan'ny rora sy ny hatsembohana.
Raha voakaikitra ianao dia miezaha hilamina ary tadidio ny loko sy ny endrik'ilay bibilava raha azo atao, satria izany dia hanampy hamantatra haingana kokoa ny karazana sy ny fitsaboana sahaza azy. Ary na izany aza, ny milamina kokoa ary mbola mijanona ihany ilay olona manaikitra, vao mainka hitaky ny fotoana hamelezan'ny poizina ny vatana. Tokony hiantso serivisy vonjy maika araka izay tratra ianao, ary asaivo mipetraka na mandry ilay olona manaikitra eo am-pitandremana ny manaikitra eo ambanin'ny haavon'ny fo. Ny diana dia tokony diovina amin'ny rano savony mafana faran'izay haingana ary rakofana akanjo maina sy madio.
Aza manandrana mitsentsitra poizina. Izany dia mety hanimba ny raharaha ary hanapoizina ny olona faharoa. Ny ratra dia tokony avela irery ivelan'ny fanasana sy fitafiana tsipiriany etsy ambony. Tsy tokony hihinana zava-pisotro misy alikaola na kafeinina koa ianao ary manohitra ny faniriana hametaka ranomandry amin'ny ratra.
Tsy dia fahita firy ny fanafihana aligato amin'ny olombelona, ​​ho faly ianao hahafantatra. Ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny alligators dia ny manalavitra ny renirano sy ny honahona izay onenan'izy ireo. Raha misy manafika anao ao anaty rano ianao dia mety hanandrana manaikitra anao ny aligato ary mihorona ao anaty rano. Tsy tokony hanandrana manohitra ny fihodinana ianao, satria mety hahatonga anao hanapaka taolana, na ny hazondamosinao aza, avelanao hamindra fo amin'ny gator ianao.
Na izany aza, tokony hametraka ady araka izay tratranao foana ianao. Satria tsy babon'ny voajanahary ny olombelona dia matetika no mamoaka olona izay manahirana azy ireo loatra. Tokony hikendry ny mason'izy ireo sy ny fofony ianao raha azo atao, fa aza manandrana manome loka ny vavany satria mahery ny herin'ny manaikitra ary mety ho ezaka very maina izany. Tokony tsy maty milalao koa ianao, satria tsy hanana antony hamelana anao handeha izy ireo.
Raha mifanena amina aligato an-tanety ianao dia tokony hiezaka handositra hatrany raha azo atao. Na dia afaka mivezivezy vetivety aza ny aligato amin'ny halavirana dia tsy afaka mitazona ny hafainganam-pandeha izy ireo. Noho izany, ny safidinao tsara indrindra dia ny mametraka elanelana lavitra eo aminao sy ilay gator araka izay tratra.
Raha sendra cougar ianao dia tokony hanao toy izany koa toa ny nihaona tamin'ny bera mainty. Misehoa lehibe araka izay azo atao ny tenanao ary manaova feo mafy amin'ny kiakiaka na fitsofana kiririoka na anjomara. Tokony hiatrika ny cougar ianao, fa tsy hitodika any aminy, fa aza atao ny mifandray mivantana amin'ny maso satria azo adika ho fihetsika mahery setra izany ary mety hampahatezitra ny cougar hanafika.
Tsy tokony hiezaka ny hihazakazaka avy amin'ny cougar ianao, satria hiteraka ny fironan'ny biby mpiremby hanenjika remby. Ny cougars dia zavaboary haingam-pandeha ihany koa, ka ho very maina ny fikasana hihoatra ny iray. Fa kosa, raha manandrana hanafika anao ny cougar dia tokony hanoheranao azy amin'ny fomba rehetra azo atao izany. Tsindrio ny cougar amin'izay fampiharana tokony hatolotrao, na ampiasao ny totohondrinao raha tsy maintsy ataonao, satria fantatry ny cougars fa voasakana amin'ny herisetra ianao. Azonao atao koa ny mampiasa tsifotra dipoavatra na spray spray mba hialana amin'ny cougar mahery setra.
Ny fanafihan'ny amboadia ny olombelona dia fahita tsy fahita firy, ary mazàna dia mitranga izany rehefa moka ny amboadia na lasa zatra an'olombelona izany. Raha tsy izany dia matetika izy ireo no mitranga rehefa manafika alika ny amboadia, izay hitany fa fandrahonana ho an'ny faritany, ary manandrana miditra an-tsehatra ny tompony.
Raha sendra amboadia ianao dia tokony hiseho ho lava sy lehibe ianao, mihemotra miadana ary mitazona ny masonao. Aza mitodika any amboadia na mandosira azy, fa izany dia hanosika ny sain'ny biby hanenjika. Raha manana alika miaraka aminao ianao rehefa sendra amboadia dia ento miakatra ny biby fiompinao ary apetraho eo anelanelan'ny biby roa ianao. Tokony hatsahatra io fihaonana io.
Raha tsy mihemotra ny amboadia ary mampiseho famantarana ny herisetra, toy ny fangalarana, ny fidradradradrana, ny fihazonany ny rambony na ny fampiakarana azy, dia tokony hitabataba araka izay azo atao ianao ary atsipy zavatra aminy. Tokony hanakana ny amboadia tsy hanakaiky izany. Na izany aza, raha manafika anao izy dia tokony hiady amin'ny fomba mahery setra araka izay tratra mba tsy hanaovanao ezaka ilay fanafihana anao.
Na izany aza, tsara kokoa ny manandrana misoroka an'io toe-javatra io amin'ny voalohany. Fanafihana biby maro no mamela toerana kely ho an'ny fahavelomana hafa ankoatry ny fanantenantsika fa lasa tsy liana ilay biby. Raha any an'ala ianao, lavitra ny sivilizasiona na ny serivisy vonjy taitra, dia kely dia kely ny zavatra azo atao raha voakaikitra ianao, voakaikitra, na maratra bibidia mahery setra.
Noho izany, zava-dehibe tokoa ny fanarahanao ny torohevitr'ireo manam-pahaizana manokana momba ny bibidia na tompon'andraikitra amin'ny valan-javaboary hahazoana antoka fa voaro amin'ny biby mpiremby ao amin'ny faritra ianao. Torohevitra ankapobeny ho an'ny mpikaroka ny natiora dia ny fivezivezena anaty vondrona, mba tsy hahafantarana anao ho lasibatra mora ianao, ary hanohy ny làlana amin'ny fotoana rehetra. Zava-dehibe izany, tsy amin'ny fiarovana ny ainao ihany, fa amin'ny fiarovana ihany koa ireo toeram-ponenana voajanahary amin'ny fanelingelenana azy ireo araka izay kely indrindra azo atao.
Tokony ho fantatrao ihany koa fa ny fitondrana ankizy any amin'ny faritra fantatra fa manana bibidia mampidi-doza dia hampidi-doza azy ireo ho lasibatra noho ny fisehoany kely sy tsy dia mandrahona.
Azonao atao ny mijery ny torohevitra sy ny fikarohana feno by clicking here.